Мировой рынок картофеля достиг рекордных высот — Картофельная Система
в Australia, Aasiya, America, Analytics, Afrika, Yurub, Wararka adduunka, Oceania
Sawirro laga soo qaaday Bartamaha Wararka Maanta
IndexBox waxay daabacday warbixin cusub, "Falanqaynta Suuqa baradhada adduunka: Saadaalin, Isbeddellada iyo Falanqaynta". Websaydh Wararka Maanta baradhada waxay bixisaa dulmar guud oo kooban oo ku saabsan natiijooyinka muhiimka ah ee dib u eegista, qoraalka buuxa waxaa lagu daawan karaa websaydhka IndexBox halkan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in sanadka 2019 suuqa suuqa baradhada adduunka uu ka koray 6% ilaa $ 140,5 bilyan, iyadoo koritaanka la xusay sanadkii seddexaad oo isku xigta kadib labo sano oo hoos u dhac ah. Qiimaha suuqa ayaa celcelis ahaan kor u kacay celcelis ahaan 3,0% sanadkii 2007 ilaa 2019. Muddadii lagu jiray dib-u-eegista, suuqa adduunka wuxuu gaadhay rikoodh aad u sarreeya sanadka 2019 waxaana la rajaynayaa inuu sii wado koritaanka sannadaha soo socda.
Liiska wadammada ugu isticmaalka badan baradhada sanadka 2019, jagooyinka hogaaminaya waxaa qabtay Shiinaha (93 milyan oo tan), Hindiya (51 milyan oo tan) iyo Yukreeniyaan (23 milyan oo tan), oo wadarta guud ee isticmaalka adduunka ay ahayd 45%. Wadamadan waxaa ku xigay Russia, USA, Bangladesh, Germany, Poland, Netherlands, Canada iyo Belarus, oo wadar ahaan 23% kale loo tiriyay.
Marka la eego qiimaha, Shiinaha oo keliya ayaa hormuud u ahaa ($ 52,3 bilyan). Kaalinta labaad ee qiimeynta waxaa qaatay India ($ 10,5 bilyan). Mareykanka ayaa raacay.
Caddadka ugu sarreeya ee isticmaalka baradhada halkii qofba sanadkii 2019 waxaa lagu arkay Belarus (591 kg qofkiiba), Ukraine (521 kg qofkiiba) iyo Nederland (350 kg qofkiiba).
Wax soo Saarkii 2007-2019
Sanadka 2019, soosaarka baradho adduunka oo dhan wuxuu gaadhay 371 milyan oo tan, koror ah 2,1% marka loo eego sanadkii hore. Isugeynta wax soo saarka ayaa kordhay celcelis ahaan 1,6% sanadkii sanadkii 2007 ilaa 2019; isbeddelka ayaan isbeddelin, iyada oo xoogaa isbeddello ah lagu arki karo sannadihii shaqsiyeed. Wax soo saarka adduunka ayaa cirka isku shareeray sanadka 2019 waxaana la rajeynayaa inuu sii wado koriimada sanadaha soo socda.
Wadamada leh wax soo saarka baradhada ugu badan sanadka 2019 waxay ahaayeen Shiinaha (93 milyan oo tan), India (51 milyan oo tan) iyo Yukreeniyaan (23 milyan oo tan), isku darka saamigooda wax soo saarka adduunka wuxuu ahaa 45%. Wadamadan waxaa ku xigay Russia, USA, Bangladesh, Germany, France, Poland, Netherlands, Canada iyo Belarus, kuwaas oo wada jir ah 25% kale.
Sanadka 2019, mugga keenista baradhada ee dibada ayaa koray 4,9% ilaa 15 milyan oo tan (koritaanka waxaa lagu xusayay sanadkii afaraad oo isku xigta kadib hoos u dhac labo sano ah). Laga soo bilaabo 2007 illaa 2019, wadarta dhoofinta ayaa kordhay celcelis ahaan 3,2% sanadkii sanadka, laakiin isbeddelada muuqda ee la dareemi karo ayaa la diiwaan geliyey sannadihii qaar.
Marka la eego qiimaha, dhoofinta baradhada ayaa si dhakhso leh ugu koray $ 4,8 bilyan (IndexBox qiyaasta) sanadka 2019. Laga soo bilaabo 2007 illaa 2019, wadarta qiimaha dhoofinta ayaa kordhay celcelis ahaan 2,8% sanadkii sanadkii, laakiin isbeddelku wuxuu muujiyey xoogaa isbeddello ah oo la arki karo muddadii la falanqeeyay.
Sanadka 2019, dhoofinta ugu weyn ee baradhadu waxay ahaayeen Faransiiska (3,5 milyan oo tan), Jarmalka (1,9 milyan tan), Netherlands (1,8 milyan oo tan), Belgium (1 milyan oo tan) iyo Masar (0,7 milyan oo tan), taas oo ka dhigan 60% wadarta dhoofinta.
Source: Wararka Maanta baradhada
Tags: suuqa baradhada adduunkaisticmaalka baradhadaDhoofinta baradhada
Ruushka wuxuu kordhiyay dhoofinta baradhada seddex meelood meel
Udmurtia waxay u dhoofisay Kazakhstan in ka badan 1,2 kun oo tan oo baradho ah
Gobolka Tyumen wuxuu qorsheynayaa dhoofinta wax soo saarka beeraha sanadka 2020 heerka $ 19 milyan, marka la gaaro 2024 - $ 30 milyan
"Amyl". Mudnaanta baradhada